» रजनी रिदम राईको ‘प्यार’ ले मच्चायो तहल्का, उत्कृष्ट ६ को यस्तो प्रस्तुति
रजनी रिदम राईको ‘प्यार’ ले मच्चायो तहल्का, उत्कृष्ट ६ को यस्तो प्रस्तुति
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार ०८:१५
मकवानपुर, २५ कात्तिक । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ सिजन २ को लाईभ राउण्डमा यतिखेर उत्कृष्ट १२ प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उत्कृष्ट १२ को प्रस्तुतिसँगै भोटिङ राउण्ड पनि खुलिसकेको छ । यस भिडियो सिरिजको दोस्रो भागमा लाईभ राउण्डको दोस्रो एपिसोडमा कसले कस्तो गाए त्यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका अन्य एपिसोडहरु बारे जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नसक्नुहुनेछ । हेर्नुहोस् भिडियो–
लाईभ राउण्डको दोस्रो एपिसोडमा वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानले बहुचर्चित गीत ‘घुम्तिमा नआऊ है’ बोलको गीत गाएर कार्यक्रमको दैलो उघारेका थिए । त्यसपश्चात टिम राजु र टिम दिपका ६ जना प्रतियोगीहरुले प्रस्तुति दिएका थिए । पहिलो प्रस्तुतिमा सिक्किमकी गीता शर्माले ‘फुल मञ्जरीले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निकै नै सुमधुर प्रस्तुति दिएकी गीताको प्रस्तुतिलाई विशेष अतिथि प्रेमध्वज प्रधानले निकै प्रशंसा गरे । त्यस्तै चारै जना कोचले उनलाई सकरात्मक प्रतिक्रिया दिए । गीताको भोटिङ कोड ०५ हो । उनी कोच राजुको टिममा छिन् । दोस्रो प्रस्तुतिमा झापाका विकास लिम्बुले ‘अलिकति नजर तिम्रो’ बोलको गीत गाए । निकै नै रोमान्टिक गीत गाएका उनको सबै कोचले तारिफ गरे । तर उनलाई बढी अप्ठ्यारो गीत छनौट गर्दा ध्यान दिन पनि कोचहरुले सुझाव दिए । उनको भोटिङ कोड ०४ हो । उनी कोच दिपको टिममा छन् । तेस्रो प्रस्तुतिमा चितवनकी अञ्जु राना मगरले ‘मेरो माया’ बोलको गीत गाईन् । उनको प्रस्तुतिलाई विशेष अतिथि प्रेमध्वज प्रधानले पनि तारिफ गरे । उनको सबै कोचले तारिफ गरे । उनको भोटिङ कोड ०२ हो । उनी कोच राजुको टिममा छिन् ।
त्यस्तै चौथो प्रस्तुतिमा कोटेश्वरका सनिश श्रेष्ठले ‘माया संसार’ बोलको गीत गाए । भ्वाईस ग्लोबलमा समेत परेका सनिशको प्रस्तुति निकै राम्रो हुँदै गर्दा पनि उनले बिचमा गीतको केही शब्द बिर्सिए । तर दर्शकमाझ पपुलर भएका उनको प्रस्तुति भने फितलो भएन । कोचहरुले उनलाई स्वास्थ्य समस्याका बावजुद पनि प्रस्तुति राम्रो दिएको भन्दै तारिफ गरे । दर्शकहरुले निकै साथ दिए । उनको भोटिङ कोड ०९ हो । उनी कोच राजुको टिममा छन् । पाँचौ प्रस्तुतिमा दार्जिलिङ घर भई हाल पोखरामा चर्चित बन्न सफल रजनी रिदम राईले ‘म प्यार बेचिदिन्छु’ बोलको गीत गाईन् । उनको प्रस्तुतिलाई कोचहरुले समेत निकै तारिफ गरे । उनको दमदार प्रस्तुतिका कारण उनी दोस्रो एपिसोडको ‘पर्फमर अफ द डे’ समेत हुन सफल भएकी छिन् । उनको भोटिङ कोड ०७ हो । उनी कोच दिपको टिममा छिन् । लाईभ राउण्डको दोस्रो एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुतिमा डिल्लीबजारका सञ्जय महतले ‘कसरी’ बोलको गीत गाएका थिए । निकै नै रकिङ प्रस्तुति दिएका सञ्जयको प्रस्तुतिलाई सबै कोचहरुले प्रशंसा गरे । कोच आस्थाले उनको प्रस्तुतिलाई स्टाण्डिङ अवेशन समेत दिईन् । उनको भोटिङ कोड १० हो । उनी कोच दिपको टिममा छन् । यसरी लाईभ राउण्डको दोस्रो एपिसोडमा गीता शर्मा, विकास लिम्बु, अञ्जु राना मगर, सनिश श्रेष्ठ, रजनी रिदम राई र सञ्जय महतले प्रस्तुति दिएका थिए । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको प्रस्तुति मनपर्यो ? को बन्ला भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को विजेता ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
राम लिम्बुले मच्चाए तहल्का